प्रार्थना घर नयाँ घर आशिष् गर्न | प्रार्थना अंकहरू
घर प्रार्थना पोइन्ट्स नयाँ घरको लागि प्रार्थना पोइन्ट्स
आज हामी नयाँ घरलाई आशिष् दिन प्रार्थना पोइन्टहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौं। भजन १२127: १ को पुस्तक बाहेक प्रभुले घर बनाउनु भएन तर तिनीहरूले निर्माण गर्ने व्यर्थमा परिश्रम गर्दछन्: प्रभुले शहरलाई सुरक्षित राख्नु भएन भने चौकीदार जागेर जान्छन्। यो केवल प्रभु हुनुहुन्छ जसले घर बनाउन सक्दछ। यसै बीच, तपाईले यो जान्नै पर्छ कि यस प्रस in्गमा घर भनेको केवल मानिस बस्ने घर मात्र होईन। यसको पनि अर्थ छ परिवार र वंश जब हामी नयाँ घरमा पस्दछौं तब कसरी प्रार्थना गर्ने भनेर ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनुभयो। येशूले भन्नुभएको छ कि जब हामी कसैको घरमा पस्दछौं, हामीले पनि यस घरलाई शान्तिको भन्नु पर्छ। यो लूका १०:। को पुस्तकमा पाउन सकिन्छ तर जे पनि घर तपाईं प्रवेश गर्नुहुन्छ, पहिले भन्नुहोस्, 'यस घरलाई शान्ति।'
जे होस्, हामी के भन्नेौं जब हामी पहिलो पटक हाम्रो नयाँ घरमा प्रवेश गर्दैछौं? चाखलाग्दो कुरा के छ भने, हामी अझै पनि यो घर प्रार्थना प्रार्थना हुन सक्छ भन्न सक्नुहुन्छ। जब हामी यो घरलाई शान्ति भन्छौं, त्यसको मतलब यो हो कि हामीले येशूलाई हाम्रो घरमा निम्त्याइरहेका छौं। ख्रीष्टलाई शान्तिका राजकुमारका रूपमा लिइन्छ, जब हामी यो भनाइलाई यस घरमा शान्ति भन्छौं, हामीले सिधा येशूलाई घरमा बोलायौं। यद्यपि, नयाँ घरको लागि प्रार्थना गर्नु त्योभन्दा पनि ठूलो छ। पहिले हामीले नयाँ घरको आशिष्को लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन आवश्यक छ। यसका साथै, हामी घर मा भगवान सर्वशक्तिमानको आशिष् को लागि प्रार्थना, परमेश्वरको सुरक्षा र सबै भन्दा माथि परमेश्वरको प्रेम को लागी प्रार्थना। यी सबै प्रार्थनाहरूले नयाँ घरमा सफल जीवन बिताउँछन्।
प्रभु येशू, म तपाईंलाई धन्यवाद चढाउँछु नयाँ घरको लागि। म तपाईंलाई बृद्धि गर्दछु कारण प्रावधानको लागि कि तपाईंले यो नयाँ घरलाई सम्भव तुल्याउनुभएको छ। म तपाईंलाई धन्यवाद दिन्छु किनकि तपाईं भगवान हुनुहुन्छ। म तपाईंलाई घरबारविहीन बनाउदिनको लागि धन्यवाद दिन्छु, यो सुन्दर आश्रयको लागि म तपाईंको महिमा गर्दछु, तपाईंको नाम येशूको नाममा उच्च पारियोस्।
प्रभु, म तपाईंलाई यस घरमा निम्तो दिन्छु। म तपाईंको प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंको आत्मा यस घरमा येशूको नाउँमा प्रख्यात होस्। म प्रार्थना गर्दछु कि सर्वशक्तिमान परमेश्वरको शक्ति येशूको घरमा यस घरमा चल्दै जान्छ। म यस घरको शान्तिलाई खतरामा पार्न सक्ने अन्धकारको सबै शक्तिहरूको विरूद्धमा आएको छु, म तिनीहरूलाई पवित्र आत्माको आगोले डप्काएँ।
हे प्रभु, तपाईं शान्तिका राजकुमार हुनुहुन्छ, म प्रार्थना गर्छु कि तपाईं आउनुहोस् र येशूको नाममा यस घरको रेखदेख होस्। म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईको शान्ति येशूको नाममा यस घरमा रहन सक्छ। प्रत्येक शक्ति र रियासत कि यो घर कब्जा गर्न को लागी खतरा हुन सक्छ, म प्रार्थना गर्दछु कि परमेश्वरको आगोले तिनीहरूलाई येशूको नाममा नष्ट गर्दछ।
हे परमेश्वर, म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि तपाईले येशूको नाममा यस घरको चारै तिर आगो बाल्नुहुनेछ। तपाईंको सुरक्षा हातहरू सबैको त्यो हातमा पर्नेछ जो येशूको नाममा यो घर बस्नेछ। को पुस्तक काम 1: 10 - के तपाईंले उनी र उसको परिवार र ऊसँग भएका सबै चीजहरूको वरिपरिको हेज राख्नुभएको छैन? तपाईंले उनका हातका काममाथि आशीर्वाद दिनुभयो, र तिनका भेडाहरू र बथानहरू चारैतिर फिंजाए। म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईंले येशूको घरमा यस घरको वरिपरि आगोको बाढी लगाउनुभयो।
प्रभु, म मृत्यु र विपत्तीको बिरूद्ध आउँछु, येशूको नाममा यस घरमाथि अधिकार जमाउने छैन। म प्रार्थना गर्दछु कि मृत्यु येशूको मृत्युमा यस घरभित्र पस्न पाउँदैन। धर्मशास्त्रले भन्छ कि हामी मर्ने छैनौं तर जीवितहरूका देशमा प्रभुको कामहरू घोषणा गर्न बाँचिरहेका छौं। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु कि यस परिवारको कुनै सदस्य येशूको नाममा मर्न नपरोस्।
प्रभु, म प्रार्थना गर्दछु कि तपाईले हामीलाई सही प्रकारको बुद्धिको पक्षमा खटाउनुहुनेछ जुन येशूको नाममा हाम्रो घरमा कुनै पीडा र निराशा बाहेक केही पाउँदैन। प्रभु, मलाई र यस परिवारका प्रत्येक सदस्यलाई तपाईंको बल र शक्तिमा बढ्नको लागि अनुग्रह दिनुहोस्।
म बिचको बिचको बिचमा आउँछु। धर्मशास्त्र भन्छ, दुईजना मिलेर काम गर्न सक्छन् जबसम्म तिनीहरू सहमत छैन? हे प्रभु, म बिन्ती गर्दछु कि तपाईले हामीलाई येशूका नाममा एकतामा रहन सहयोग गर्नु हुन्छ। दुश्मनले कुनै पनि हिसाबले हाम्रो बीचमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई परिवारको रूपमा आक्रमण गर्ने योजना गरेको छ, म प्रार्थना गर्दछु कि परमेश्वरको आगोले येशूको नाममा यसलाई नष्ट गरून्।
हे प्रभु प्रभु, ख्रीष्टले हामीलाई सिकाउनुभयो कि सबैभन्दा ठूलो आज्ञा प्रेम हो। म तपाईंलाई प्रार्थना गर्दछु कि कसरी तपाईंले हामीलाई येशूको नाममा आफैंलाई सही तरिकाले प्रेम गर्न सिकाउनुहुन्छ। म प्रार्थना गर्छु कि तपाईले हामीलाई येशूको नाउँमा निरन्तर प्रेममा रहन अनुग्रह प्रदान गर्नु हुनेछ।
प्रभु म सबै चीज र मसँग यस घरमा प्रवेश गरिरहेको सबैलाई घोषणा गर्दछु, म येशूको नाममा ती मध्ये कुनै पनि गुमाउने छैन।
हे प्रभु, म शत्रुहरूलाई परास्त गर्ने प्रत्येक शक्तिशाली मानिसलाई म यस घरमा बाधा पुर्‍याउँछु। म येशूको नाममा शक्तिले उसलाई हप्काउँछु। म प्रार्थना गर्दछु कि त्यस्तो बलियो मान्छेले येशूको नाममा आफ्ना शक्तिहरू गुमाउनेछ। प्रत्येक आसुरी वार्तालाप जुन हामी यसका बासिन्दाहरूका विरुद्ध यस घरमा भइरहेको छ, म तपाईंलाई येशूको नाममा आज परमेश्वरको आगो भन्छु। प्रभु, हरेक दुष्ट जरा जुन यस घरको जमिनमा हप्काउने वा शैतानी यातना दिनलाई रोपिएको छ, म प्रार्थना गर्छु कि परमेश्वरको शक्तिले तिनीहरूलाई आज येशूको नाममा उखाल्न। प्रभु, यस घरको कुनै पनि कुराले मेरो परिवारको शान्तिमय जीवनलाई खतरामा पार्नेछ र म, येशूको नाममा यस पल्ट आगोमा फालिदिन्छु।
हे प्रभु, हरेक दुष्ट व्यक्तिले शत्रुको यो घरको शान्ति भrupt्ग गर्न खटाउनुभएको छ, आज येशूको नाममा मर्न। म येशूको नाममा सबै खराब कब्जा गर्नेहरूको विरुद्धमा यो ढोकाको ढोका बन्द गर्दछु।
अघिल्लो लेखमाप्रार्थना पोइन्ट्स नयाँ कारलाई आशिष्‌ दिन्छ
अर्को लेखमाप्रार्थनाले विश्वास गर्नेको रूपमा उदासिनता हटाउन पोइन्ट गर्दछ
traore salimata जुलाई १, २०१ 31 साँझ :2021::7 बजे
moi je suis traore salimata et je suis de la côte d'Ivoire, je suis जारी d'une famille musulmane mais je me suis convertit à la धर्म chrétienne mais सोम homme est toujours musulman et nous vivons ensemble sans retre marié
cela fait6ans qu il soufredune plaie incurable et moi aussi il ya des esprits de nuits qui me थकान nous avons beaucoup tourné et sans rien et j'ai vu vos prières sur la spirituelite qui m é ifdifié si vous receves mon message j 'ai vraiment besoin de vos prières pour moi et ma famille merci
प्रशासन स्टाफ अगस्त,, २०१ At बिहान :2::2021 बिहान
तपाइँ मलाई यो लाइन 0703 253 3703 मा व्हाट्सएप को माध्यम बाट च्याट गर्न सक्नुहुन्छ
सियरा लियोनको राष्ट्रको लागि प्रार्थना
स्ट्रेंगट र कम्फर्टको लागि प्रार्थना